10 Hapana Bullsh * t Zvikonzero Nei Vakadzi Vasiya Varume Ivo Ivo Vavanoda - Ukama
10 Hapana Bullsh * t Zvikonzero Nei Vakadzi Vasiya Varume Ivo Ivo Vavanoda
Sei munhu achisiya mumwe munhu waanoda?
Ichi chinhu chinorwadziswa nevanhu vazhinji kuti vanzwisise. Vamwe vanotoramba kutenda kuti zvinoita.
Asi kunyangwe iri kusiya hukama kana kurega kuenda kumhuri yese, imba, uye hupenyu hwakagovaniswa, vamwe vakadzi vanosarudza kusiya varume vavanoda.
Ngatimhanyei kuburikidza gumi yezvikonzero zvakajairika nei vakadzi vachigona izvi.
1. Pane kushayikwa kwekufarira.
Imwe yenyaya hombe idzo chero hukama, kusanganisira wanano, yaungatarisana nayo kudzikira kwechido nekufamba kwenguva.
Ichi chinhu chinogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakawanda, asi hazviwanzo kurasikirwa nerudo.
Isu tese tine hupenyu hwakabatikana, kungave kuri kwedu mabasa, vana, kana mahobi. Kuve wakabatikana zvinoreva kuti isu kazhinji tinofanirwa kukoshesa zvatiri kuita uye kwatinoshandisa yakawanda yesimba redu nenguva.
Vazhinji vedu tinotora hukama hwedu sekurerutsa nedzimwe nzira.
Hazvirevi kuti isu hatina hanya, ndezvokuti isu tinonzwa sekuti mumwe wedu acharamba aripo uye isu tine imwe rusununguko rwekuita zvimwe zvinhu, takachengeteka mukuziva kuti hukama hwedu hunogara huripo muhupenyu hwedu.
Kufunga kuti hukama hwedu huri munzvimbo yakanaka kunogona kutungamira kwatiri kuisa nguva yakawanda nesimba mukuita zvimwe zvinhu zvehupenyu, zvichikonzera kuti tirege iye watinoda.
Vakadzi vanogona kubva nekuti mumwe wavo arikuisa mari panguva ino nekuedza kumwe kunhu uye vanonzwa kusurukirwa nekuregeredzwa.
Kana, vanogona kunge vari ivo vakaona kuti, kunyangwe vachida mumwe wavo, vanonakidzwawo nekuita zvimwe zvinhu.
Humwe hukama hunosvika panopaza apo munhu wega wega anofanira kusarudza kuti chii chakanyanya kukosha kwavari - mumwe wavo kana ivo pachavo, vangangoita.
Kana isu tave kufarira kushandisa nguva nevamwe, kuva neyedu yekuzvivaraidza, uye kurarama zvakanyanya hupenyu hwekuzvimirira, vamwe vedu vanogona kunzwa sekunge tiri kuvasiya kumashure.
Izvi ndizvo zvinowanzo tungamira vakadzi kuti vasiye varume vavanoda - chero ripi divi rehondo iyo yavari, kungave kuri kuregeredzwa kana kuchangobva-kutsva.
2. Murume wavo arasika.
Kubiridzira chinhu chikuru mukuparara kwehukama.
Zvinogona kunge kuchine huwandu hwakawanda hwekudanana pakati pako nemumwe wako, asi izvozvo hazviite kuti zvive nyore kana mumwe wako anga asina kutendeka.
Kugara nemumwe munhu ari kubiridzira pauri kunogona kusakwanisika kune vamwe vanhu, uye zvinoshamisa zvakaoma kune vamwe.
Zvakaoma kuziva manzwiro aunogona kuita dzimwe nguva, kunyangwe iwe uchiziva kuti unovada zvakadzika pasi. Iwo manzwiro ekutengesa uye kunyadziswa zvinogona kunge zvakaoma kuti uwane pamusoro pechiito pachako.
Ikozve kune yese mibvunzo iwe yausingadzivisike kuve nayo: yaingova iyo kamwe chete, anomuda here, zvaive zvirinani - uye nei ?!
Iwe zvakare ungangove uri kubvunza kugadzikana kwehukama hwako kupihwa kuti mumwe munhu waune hanya naye achangobva kupesana neiyo musimboti musimboti weakasarudzika, hutano hwekubatanidza
kusaina mukomana anotya nemanzwiro ake
Izvi zvakajairika, asi zvinogona kutungamira kuti usiye murume waunoda, sezvo pasina munhu anoda kuve muhukama husina kugadzikana.
3. Rudo rwuripo, asi kukwezva kwaenda.
Ichi chinonyengera chaizvo kuyedza kutsanangurira mumwe munhu asina kumbozviona, asi zvinogona kuve chimwe chezvikonzero zvikonzero nei mukadzi afunga kusiya murume waanoti anoda.
Zviri zvachose zvinogoneka kuda mumwe munhu pasina hazvo uchiri kukwezvwa kwavari!
Izvi zvinogona kuitika nekufamba kwenguva uye kazhinji zvinononoka kuita.
Kungava kuti havasi ivo chete munhu wawakadanana naye pakutanga. Hupenyu hunochinja tese, uye vamwe vedu vanochinja pamitengo yakasiyana kana nenzira dzakasiyana zvachose kune vatinoshanda navo.
Zvinogona kunge kuti mukomana wako anga aine moyo unoshamisa uye anetsika pawakatanga kusangana ndokudanana, asi parizvino ave nehutsinye uye ane tsika dzakaipisisa.
Zvinogona kuve zvinonyengera kuziva mabatiro erudzi urwu mamiriro nekuti iwe uchiri kuda ivo panhongonya yavo, asi mabiti awakawana anokwezva achangopera.
Saizvozvo, iwe unogona kunge wakaungana pamwechete pawaive mushe mushe mushe uye mune hutano uye makagara mune yakasarudzika vaviri tsika yekukomba pakudya kudya!
Ehezve, kutaridzika kwaunoita uye kuti unorema zvakadii hakuratidze kukosha kwako, asi musimboti weshanduko iyi unogona kukonzera shanduko mukukwezva kwaungaita iwe nemumwe wako.
Unogona kunge wakadanana nekuda kwekuti imi mese makanakidzwa kuenda kujimu uye kubuda kunze kwenguva refu pamwe chete.
Icho chokwadi chekuti izvo zvaenda uye mumwe wako ari zvishoma lazier kana kunyangwe kungoita kushoma kunogona kuita kuti vasave vanoyevedza zvichienderana nehunhu hwavo kupfuura huremu hwavo!
Chero nzira, vakadzi vanowana vavakaroorana navo vasingatarisike vanogona kutamba chinzvimbo chikuru mavari vachifamba kubva kuvarume vavanoda.
4. Hukama hunobva hwabatana.
Hukama hunogona kukurumidza zvikuru kuita kudyidzana-kunoenderana kudyidzana, izvo zvisina hutano uye zvinogona kuva chepfu kuva mukati.
Vamwe vakadzi vanoona kuti ichi chikonzero chakaringana kuti vabve.
Vamwe vanoona kuti ivo ndivo vari kutsamira pane mumwe wavo, nepo vamwe vachiziva kuti mumwe wavo ndiye ari kuvamanikidza.
Kana iwe wakaziva kuti, semukadzi ari muhukama, urikuisa kumwe kumanikidza kune mumwe wako kuti ave nechekuita mune zvese zvaunoita, zvinogona kukuita kuti ude kunanga kubuda.
nhetembo nezve zvinoreva hupenyu
Zvinotyisa kungoerekana waziva kuti iwe 'unoshaiwa' kana 'kunamatira' uye kuti unogona kunge uine nyaya dzekutonga dzine chekuita nemumwe wako.
Unogona kuzosvika pakuona kuti une godo rakanyanya pahukama hwavo kana kutarisira kuti vazoswera newe - zvese nguva.
Uku kuziva kwakanaka kwemarara uye kunogona kukutungamira kuti umise hukama kuitira kuti mununure mose.
Iwe haudi kuenderera kuve iyeye munhu kana kutamba chinzvimbo ichocho, uye iwe unoda kuve neimwe nguva kune iwe wega, kuve usina kuroora, kuitira kuti udzokere mukuzvisimbisa iwe pachako kuitira kuti iwe usatsvage iyo yenguva dzose rutsigiro kubva kune mumwe wako.
Iwe unogona zvakare kuona kuti iwe unoda mukomana wako kana murume wako zvakawandisa kuti uzviise iwo mukati mekunetseka kwekuve muhukama hwehukama-hwakabatana hwakashanduka.
Ndezvechokwadi asi ichokwadi - kana iwe uchida mumwe munhu, rega aende. Dzimwe nguva zviri nani kuti munhu wese aende kure, kunyangwe iwe uchivada, uye uzvimise kubva mukugona kuvakuvadza zvakanyanya.
Saizvozvo, iwe unogona kunge wakaziva kuti mumwe wako ndiye ave kunyanya kuvimba newe nekufamba kwenguva.
Aya ndiwo mamiriro ezvinhu akaoma kubata sezvo iwe uchida kutsigira, asi iwe unofanirwa kuwana chiyero pakati pekutarisira nekuzvitarisira!
Vazhinji mukadzi akasiya murume waanoda nekuti ivo havakwanise kurarama nekuve nemumwe munhu anovimba navo.
Hukama hwakawanda hwevanhu hunosanganisira chiyero cherimwe rudzi - imi mose munonakidzwa nekupedza nguva muri pamwe chete, asi nemiwo munokoshesa, uye munoremekedza, kuti mumwe nemumwe muve neupenyu hwenyu hwekurarama.
Kana ichi chiyero chichipfuura, mune chero nzira, zvinhu zvinogona kukurumidza kudzika.
5. Nyaya dzekuvimba.
Zvino, ichi chinonyengera chaizvo, asi zvakare zvakajairika zvakajairika.
Kuvimba ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvehukama uye pamwe chakanyanya kukosha kuti chishande.
Isu tese tinoda kukwanisa kuvimba nevamwe vedu, asi chii chinoitika kana tisingakwanise kana kusadaro?
Kushaikwa kwekuvimba kunogona kupinda munzira yezvakawanda zvezvimwe zvikamu zvikuru zvekuve nemumwe munhu - kugarisana, kukwezva, kunzwisisa, uye kunakidzwa.
Iwe unogona kunge uri muhukama hwehope kana iwe uchikwanisa kutarisa zvese izvi zvinhu kubva pane zvakanyorwa, asi pasina kuvimba, hapana hwaro chaihwo hwekubatanidza kwako.
Kungave kuti iwe hauvavimbe navo nemari uye unonetseka nezvemari yavo, vangave vari kubheja kana kungoshandisa mari vasina.
Chingave chimwe chinhu chakanyanya kushushikana - vanogona kunge vakataura zvinokuvadza kwauri izvo zvinoita kuti zviome kuti iwe urege kurinda pasi vanogona kunge vakatokubiridzira munguva yakapfuura.
Chero zvazvingava, vakadzi vazhinji vanogumisa hukama nekuti ivo havakwanise kuvimba nemurume wavanaye.
Ichi chikonzero chakasuruvarisa chekuti kudyidzana kupere, asi kazhinji ndiyo nzira ine hutano, yakura uye ichaponesa vanhu vese kugumbuka, kutsamwa, uye kushushikana pamoyo.
17 Nzira dzeKurega Kuva Anonamatira Uye Anoshaya Muhukama
Sei Kumira Kuve Wakazvimiririra Muhukama Hwako
Ungaita Sei Kuti Uwedzere Kudanana Newaunofambidzana Naye: 6 Hapana Bullsh * t Matipi!
Maitiro Ekuita Kuti Murume Akuremekedze Iwe: 11 Hapana Nonsense Matipi!
6. Kuderera kwehukama hwepedyo.
Kuderera kwehukama hwepedyo kunogona kuve kwakakomba kupfuura kunganzwika pakutanga.
lil uzi vert zuva rekufa
Haisi kungoti iwe unoda kubata maoko nguva dzese nemunhu anongoda kubata maoko dzimwe nguva, ndezvekuti kuswedera kwevaviri venyu kwapera.
Kushaikwa kwehukama hwepedyo kunogona kunzwa sekuguma kwehukama hwako mune dzimwe nzira sekunge urikurambwa, ndoda, kuburikidza nekushaikwa kwezviito zvinoratidza rudo.
Hazvina kushaiwa kana kusiririsa kuda kumwe kudyidzana, uye kubata (uye bonde) chikamu chakakura chehukama hune hutano kune vakawanda vakaroorana.
Kana huwandu hwekubata uye nguva yakapedzwa kuve padhuze zvaramba, hongu pachave nemabhero ealam anoramba achienda mupfungwa dzako.
Vakadzi vanowanzo tanga kunetseka kana shanduko iyi yemaitiro yabva pane chimwe chinhu chavari kuita (semuenzaniso, kugumbura mumwe wavo neimwe nzira), chimwe chinhu icho mumwe wavo ari kuita (semuenzaniso, kubiridzira nemumwe munhu), kana chimwe chinhu chakashanduka pamusoro pavo (semuenzaniso, kuwana huremu hushoma).
Idzi dzese mhinduro dzechisikigo, asi dzichasiya mukadzi achishamisika kuti chii chiri kutora nzvimbo.
Iyo yakareba ichienderera, iyo yakawanda yenyaya inova iyo. Unogona kutanga kunzwa sekuti haugone kuenda kune mumwe wako kuti umbundire kana kuti unganzwa kusanzwisisika uchitanga bonde.
Iwe hauzive mapinduriro avachaita uye wave kutonetsekana kuti zviri nekuda kwechero hombe nhamba yezvikonzero, kusanganisira izvo zvakanyorwa pamusoro, saka unomira kuyedza.
Kunyanya paunomira kuyedza, kushoma mukana ivo ndizvo tanga kuyedza uye iwe unobatwa mudenderedzwa rinotyisa.
Iyi denderedzwa inogona kukanganisa kuzvivimba kwako uye, kunyangwe iwe uchida mukomana wako kana murume, iwe uchafamba kuti uzviponese.
7. Misiyano isingawanikwe.
‘Chaunongoda rudo,’ yakaimba The Beatles… asi vangani vedu vanozvitenda?
Ipfungwa huru uye ipfungwa inotakura hukama kwenguva pfupi. Munogona kuwana kuburikidza nekusangana nemhuri dzemumwe nekufamba pamwe chete pahwaro hwekuti munodanana uye zvakwana.
Asi chii chinoitika kana iwe ukatanga kuita hurukuro chaidzo pamusoro pezvinhu chaizvo?
Pane imwe nguva, mumwe wenyu angangomutsa nyaya yevana kana yekuroora kana kuenda kunze kwenyika kuti uwane mukana webasa.
Panguva ino iyo rudo rwakangoerekana rwusingakwani .
Unogona kunge uri munyama uye inoenderana nepfungwa uye murudo, asi kana mumwe wenyu achishingirira kuti havambodi kuroora uye mumwe wacho achinyanya kuzvida, une nyaya.
Izvi zvinoshanda kune kumwe kupesana kusingachinje - mutsauko muchitendero, semuenzaniso, unogona kunzwa sechinhu chekufunga 'gare gare' kudzamara chimwe chezvaunotarisira zvehukama hwako zvachinja.
Zvinogona kunge usiri kufarira kuti mukomana wako ane chekuita sei nemhuri yake nekuda kwechitendero chake kana tsika yaunofambidzana nayo anogona kutsamwira kutenda kwako uye kuti inguvai yenguva yako inotora.
Izvi zvinhu zvisingaite kuti zvishanduke uye, dzimwe nguva, vakadzi vanosiya varume vavanoda nekuti hapana ramangwana chairo navo.
8. Kushaya kuonga.
Isu tese takaona mafirimu akakwana nezvekuputsa kuziva kuti vakadzi vazhinji vanosiya vavakaroorana navo nekuti havachanzwi kukosheswa.
Kazhinji, izvi zvinokonzereswa nekubatanidzwa kwezvikonzero zviri pamusoro, asi ichiri nyaya iri pachayo.
Vakadzi, vese vanofungidzira uye muchokwadi, vanoita zvakaipisisa kana zvasvika pakurera vana nekutarisira imba.
Chokwadi, kune hukama hwakadzikama kwazvo apo murume anogara pamba mukadzi achishanda, kune hukama apo mukadzi anofara chose kugara pamba, uye pane mamiriro ezvinhu anoshandira mhando dzese dzevaviri vasipo kuti vatongwe. .
Izvo zvakati, chimwe chezvikonzero chikuru nei vakadzi vachienda ndechekuti vasanzwe kukosheswa pane zvese zvavanoita.
Zvinogona kuve nyore nyore tora vatinoshanda navo sevasina basa uye kusaziva kuti yakawanda sei yavanotiitira uye nemuhupenyu hwedu.
Semuenzaniso, kugara pamba vanamai vanogona kuona kuti vanoswera pamba nemwana wavo achangoberekwa, neimwe nzira vanokwanisa kurongedza mumba uye kutenga chikafu ...
… Mumwe wavo anouya kumba nenguva yemwana nguva yekurara obva apedza manheru achinyunyuta kuti zvakatora nguva yavo yakakosha uye iye zvino havakwanise kupedza basa ravo / kuona TV / kurova bhawa remitambo neshamwari dzavo.
Hongu, ndeye stereotypical zvakanyanya uye nevakadzi, asi ndizvo zvakaita hupenyu chaihwo - nyatso tarisa maforamu epamhepo emamoms uye iwe uchaona yakawanda yemapositi nezve kusakoshesa kwavanonzwa kune zvese zvavanoita.
9. Pane kumanikidza kwakanyanya.
Iyi inonyengera uye inoenda nenzira yakatarisana nevakadzi-yakatarwa isu yataurwa pamusoro - tinoda kuve neruramisiro!
Pane fungidziro yekuti kana chero mubereki achizosiya, kazhinji ndiye murume.
Ehezve, izvo hazvisi zvechokwadi nhasi sezvazvaive kare, asi kuchine huwandu hwakanaka kwazvo hwehukama huchipera nekuda kwekusiya kwemurume.
Nekudaro, zvinogona kuuya sekushamisika kuti vamwe vakadzi vanofamba vachienda kune vavakaroorana navo nemhuri. Chisingazokushamisa iwe ndechekuti kufunga kwavo kunowanzo fanika kune kwevarume…
Iko kumanikidzwa kwekuva amai nemukadzi / mudiwa kunogona kuwana zvakawandisa kune chero munhu dzimwe nguva.
Zvekare, uku kunzwa kwepanyama, kunyanya kune avo vane vana vadiki kwazvo. Pane zvakawanda zvekuita uye kuziva uye nekuteerera, uye yedu-yakatarisana nemifananidzo, yemagariro-midhiya-inokoshesa nyika inoita kuti tinzwe sekunge isu tinofanirwa kuve takakwana nguva dzese.
Tinofanirwa kuve nevana vakanaka vakapfeka zvipfeko zvinoenderana izvo vanogara vakanyarara isu tichipeta kune vanogadzira vhudzi / spa / nzara salon nguva dzose kuti tigare tichitaridzika takashongedzwa uye tichinakidza nguva dzese.
Kudya kwemanheru kunofanirwa kunge kuri patafura (nekenduru uye imwe waini) yekuuya kwemumwe wedu kumusha.
Kune zvakare kumanikidzwa-kwakanangidzirwa pabasa kune vakadzi uye chishuwo chekuve pamusoro pemitambo yedu.
Kune vamwe vakadzi, pane zvese yematambudziko aya pavari.
Hazvishamise kuti hupenyu hunogona kukurira zvakanyanya, izvo zvinowanzoendesa kune vakadzi kusiya varume vavanoda nekuti havagone kubata nekushushikana kwehupenyu hwavo (hwakagovaniswa).
10. Mwoyo wakapfuura wakarwadza.
Nepo isu tese tichinzwisisa kukosha kweiko pano uye ikozvino, zvakaoma kusafunga nezve zvakapfuura dzimwe nguva.
Chimwe chezvikonzero chikuru nei vakadzi vachisiya vavakaroorana navo chiri pasi penhoroondo yekusuwa kwemoyo kana hukama husina hutano.
Izvi zvinowanzo kukonzerwa nekutya kwezvinhu kuzvidzokorora ivo nevavanosangana navo nyowani.
Zvinogona kunge kuti wavakambodanana naye aivatyisa nekuvabata zvakaipa.
Zvinogona kunge kuti ivo vanoziva kuti vanogona kuve vanotsoropodza muhukama uye vanoda kudzivirira kuva munhu iyeye zvakare.
Zvinogona kunge zvichikonzerwa nekurambana kwakaipa kana nyaya inosiririsa yerudo yakaguma zvinotyisa.
Ndingabatsira sei kushandura nyika
Chero nzira, vakadzi vazhinji vanotakura mukwende yavo yepamoyo pamwe navo padyo padyo nemoyo yavo kupfuura varume vazhinji.
Izvi zvinoreva kuti vakadzi vane mikana yakawanda kupfuura yevanhurume yekusiya kunze kwekutya kuputsika moyo.
Vanotya kugara sezvo vasingade kurwadziswa pamoyo nekugumbuka havadi kunzwa kutengeswa nemurume wavanoda.
nzira yekukunda kusavimbika muhukama
chii chandinofarira nezvemienzaniso
maitiro ekururamisa tsamba yerudo
sei varume vachidzokera shure kana vachikudai
kana wabhoikana unoita sei